@micrologic - Steem - GoldVoice.club
I'm walking today .that is Renton start app
I'm ok today walking. စောငျရမျးမော စောငျရမျး ကွိုးစားပမျးစား လြောကျထားရ။ i'm ok I scary corona ဒါကွောငျ့ကနျြးမာခငျြလို့လမျးတလြှေောကျနတောဘဲ။thanks all
ကောင်းသောညလေးပါ steemit ရေ မတွေ့တာကြာပီ နေကောင်းရဲ့လားဟသတင်းတွေကတော့မကောင်းဘူးနော် ဈေးတေကျ လို့စိတ်ညစ်နေကြတယ်ဟ ဈေးလေးဘာလေးလဲ တက်ဦး ရေးတဲ့သူတွေအားရှိအောင်ပေါ့
အားရပါးရသာတက် 1000 ရာခိုင်နှုန်းတက်လဲကောင်းပ တက်စရာရှိတာသာတက် ကောင်းသောညလေးမှာ
အားရပါးရသာဈေးတက်လိုက်ပါတော့ကွာ ok good night!
ဘာမှမဟုတ်ဘူး golden duck ရောက်တုန်း အသုံးတည့်မလားရိုက်လာတာ
အသုံးတည့် သွားတယ် ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာပါနော် အဆင်ပြေပါ၏။
ကျွန်တော်ကတော့ အရက်သမား အမြဲမူး မနေပေမဲ့ ကိုဝေလ ရဲ့ သီချင်းလိုပေါ့
တစ်စုံ တစ်ယောက်သော သူကြောင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံ ရှာပေမယ့် "၁၅ မိနစ်ကျော်
လာရင် အလိုလို လွမ်းလာတယ်" အဲ့သည်က စလို့ပေါ့ဗျာ။ အရက်သမား လို့နာ
to day my report!
နေမကောင်းတာနဲ့ ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ဘူး ကြားထဲ termux mining ကို သူငယ်
ချင်းကလာနှောက်တော့ ပိုဆိုးရော down ပီ! ;'(
ကဲ ဒီနေ့တော့ အနားယူရင်း စာလေးရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ ရေးမိပါပြီ
မနက်က Hacking စာအုပ်ဖတ်ရင်း Target အကြောင်းရေးပြတာက တစ်ခုစဉ်းစားမိလို့ပါ။ချည်းကပ်နည်း ကိုရှင်းပြနေတာပါ ဒါကတော့ မသိဘူးလိုလိုနဲ့ သိသာလွန်းတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ တွေ internet ကိ…
today my mdy going!
my today walking & running but time is another my rumning 40% walking 60% plus (+) 100% so my happy.
why i'm hero.
ပေးပါ့ရစမိတ်ဆွေ လူတိုင်းခံစားတတ်ကြတယ် ခံစားဖူးကြတယ်မိတ်ဆွေ သငါ့ကိုခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာနည်းပညာသစ်မဟုတ်ပေမယ့် နာကျင်ခံစားမှုအနုပညာ အ
ကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးမလို့ပါမတက်ဖြန်ကစလို့ vote & resteem လေးတွေဆပးကြပါလို့ shwe နာမည်ခံတဲ့ myanmar များ gold ဖြစ်စေဖို့ပါ thanks
ဒညင်းသီး နှင့် ကျန်းမာရေး
မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွပ် ထဲမှာ ပီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းက Dr'Cherry ရဲ့ဆေး
ခန်းမှာ အများဆုံးသောလူနာ တွေကတော့ ဆီးမသွားခြင်း ခါးနာခြင်း ကအဓိက
ရောဂါတစ်ခု အနေနဲ့ ဆေးခန်းလာပြတဲ့ လူနာရဲ့ 65% လောက်က ဒညင်းသီး